काठमाडौं, २ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमण सकेर नेपाल फर्किए लगत्तै आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नेपालमा विदेशी सेना र शान्ति प्रक्रियाको मुद्धा उचालेर सरकारको समिकरण बदल्ने खेल भइरहेको खुलासा गरे ।
सत्तारुढ दलकै प्रमुख सचेतक गुरुङले संसदमै यस्तो खुलासा गरेपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग फैलिएको छ । आखिर कसले भित्र्याउन खोज्दैछ त विदेशी सेना ? अनि कसले सरकारको समिकरण बदल्ने खेल खेल्दैछ ? प्रमुख सचेतक गुरुङकै भाषामा भन्ने हो नेपालको सार्वभौमसत्ता र अस्मिता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने स्थितिमा मुलुक पुगिसक्यो । उनले भने ‘नेपाल अब विदेशी सेनाको अखडा स्थल बन्यो भनेर अफगानिस्तान जस्तो मात्रै हुनेवाला छैन् । दक्षिण कोरिया मात्रै हुनेवाला छैन । दुईवटा छिमेकी राष्ट्रको बीचमा विदेशी सेनाको अखडा बन्यो भने नेपालको भूगोल रहन्छ कि रहदैन ? त्यो दिशातर्फ जादै छ ।’
नेपालीमाथि सबैभन्दा बढी चलखेल गर्ने भारत मानिन्छ । त्यसपछि चीन, पश्चिमा देशहरु छन् । तर दुई छिमेकी भारत र चीन मध्ये चीनको प्रभाव अलि कम देखिने जानकारहरु बताउँछन् । प्रमुख सचेतक गुरुङको नेपालमाथि अहिले पश्चिमा देशहले चलखेल बढी गरेको धारणा थियो । एकातिर सत्तारुढ दल नेकपामाथि चौतर्फि आक्रमण भइरहेको बेला सरकारको अनेकथरिका विवादले देशमा आन्दोलनहरु चर्किन थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आफैभित्रको विवादमा रुमल्लिएको छ । सत्तारुढ दलमा पनि आफ्नैहरु जुधिरहेका छन् । के गर्ने कसो गर्ने भन्ने बिषयमा सरकार अलमलिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले कमजोर प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्धालाई किन हतियार बनाइरहेका छन् सत्तारुढ र प्रतिपक्षले गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ । अहिले शक्ति राष्ट्रहरुमा व्यापारिक युद्ध चलिरहेको बेला नेपालमा फेरी पनि द्धन्द्ध निम्त्याएर विदेशी सेना नेपालमा भित्र्याउने र छिमेकी मुलुक चीन र भारतमाथि प्रहार गर्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन् । केहि समयअघि अमेरिकाले चिनियाँ सामानमाथि कर वृद्धि गरेको थियो । त्यसको काउन्टर स्वरुप चीनले पनि अमेरिकी सामानमाथि कर वृद्धि गर्यो । हालै मात्र अमेरिकाले भारतलाई दिदैं आएको व्यापार सुविधा कटौती गरेको बदलामा भारतले ७० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको छ । भारतले गत जुन महिनामै अमेरिकी सामानमा १२० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेको थियो । यसरी ठूला शक्ति राष्ट्रहरुमा व्यापारिक युद्ध चर्किरहेको बेला केहि शक्तिहरुले नेपाल प्रयोग गरेर शक्ति राष्ट्रकै रुपमा चिनिएका भारत र चीनमाथि हमला गर्ने योजना हुनसक्छ । गुरुङले यी विषय प्रष्ट नभनेपनि उनको सार यहि हुनसक्छ, यसमा नेपाली राजनीति अलि चनाखो हुनुपर्छ ।
त्यसोत हालै संयुक्त राष्ट्रसंंघसमेतको संलग्नतामा पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरुले संयुक्त वक्तव्य निकाले । संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल पक्षधर हुँदा हुदै कुटनीतिक मर्यादा उलंघन गरेर नौ वटा मुलुकसँग मिलेर संयुक्त वक्तव्य निकालेर शान्ति प्रक्रियामाथि अवरोध गर्न खोजेको गुरुङको दाबी पनि छ ।
२०७६ असार २ सोमबार १०:०१:०० मा प्रकाशित